Pisa Pelle Chikwata cheItaly
Nyorera & Chengetedza
Tora Chakavanzika Discount Code mune yako email.
All Categories All CategoriesAccessoriesmukwendebhandibriefcasebatiramunhugwaro nyayaFLMsagaLaptopmutumwafungidzirafambachiunowallet
Tenga zvigadzirwa zvedu
Yakagadziriswa muTuscany, Italy
Tenga akaomesesa eItaly Matumba ebhegi ku Great Mitengo
Shop Clutch Mabhegi
Tenga Mabhegi Mabhegi
Chitoro Muchinjikwa Muviri
Tenga Mabhegi Evarume
Chitoro Kufamba Mabhegi
Chitoro Laptop Bags
Pisa Pelle ane rudo rwezvinhu zvakagadzirwa nemaoko uye zvehunyanzvi. Tine mhizha dzakanakisisa muTuscany, Italy. Iyo Tuscany dunhu reItaly ndiwo moyo nemweya wepasirese kugadzirwa kwematehwe pamwe nezvakavanzika zvebhizimusi zvichipfuudzwa kumarudzi.
Zvakavanzika Zvemhuri Zvakapfuurwa Kupfuura Nhoroondo
Iyo yekubuda, inofambira mberi uye ine simba mercantile guta-nyika nguva mu Medieval Italy yaive nharaunda yakakwana yeiyo indasitiri yekuchenesa dehwe kuputika. Guilds akaumbwa kuchengetedza nzira dzakavanzika dzinoshandiswa kugadzira makanda emhando yepamusoro asina kufananidzwa kumwe kunhu munyika. Aya matekiniki achiri zvakavanzika zvemhuri zvakachengetedzwa, zvinopihwa kubva kuchizvarwa kuenda kuchizvarwa munzvimbo dzakahwanda dzepasirese dzakagadzirwa kwehafu yemakumi emakore. Nhasi Italy inosvika 16% yepasi rese yekugadzirwa kweganda uye inopfuura zvikamu zviviri kubva muzvitatu zveganda rese rakagadzirwa muEurope.
Yakakwirira Midziyo Zvivakwa uye Kutarisirwa kune Nhamba
Aya ndiwo maitiro, anoita kuti zvisikwa zvedu zvive zvechokwadi uye zvinomiririra hunyanzvi hweTuscan.
Iko kunaka kwechigadzirwa ndiko kwatiri mhedzisiro pakati petsika uye zvazvino tsika.
Icho chiri muchinangwa chedu kuziva chigadzirwa, icho chinosangana nezvinodikanwa zvemazuva ano zvezviito zvakasiyana uye ergonomic.
Leather Laptop Bhegi
Bhegi remakomputa iri rinofanirwa muhupenyu hwedu hwezuva nezuva, sekuwedzera kune PC kunogona kuve nemagwaro, dhayari uye zvimwe zvinhu zvinodiwa kubasa kana kudzidza. Bu ...
Nguva yezhizha: red chikwama kana bhuruu chikwama?
Kana mamiriro okunze anodziya pakupedzisira anouya uye mazuva achiwedzera, mavara erima anopera, achisiya nzvimbo yematani anopenya, akasimba, akapiwa simba ...
Iyo Tanning Dunhu reFlorence
Iyo dunhu rematehwe nedzeshangu muTuscany ndeyechokwadi chakakosha kukosheswa, iko kunaka kwezvakagadzirwa muItari, yanga iri ...
Pisa Pelle ndeye yekambani yekutengesa neyekushambadzira yeAmerica iri kunze kweTexas. Pisa Pelle ane rudo rwezvinhu zvakagadzirwa nemaoko uye zvehunyanzvi. Tawana mhizha dzakanakisisa muFlorence & Pisa, iyo Tuscany Dunhu reItari. Florence ndiwo moyo nemweya wepasi rose wekugadzira zvigadzirwa zveganda pamwe nezvakavanzika zvebhizimusi zvichipfuudzwa kumarudzi. Isu takasarudza vatengesi vedu kubva pahunhu hwakanaka uye nekukurukurirana kukuru kuti vatibatsire kupa yakanakisa sevhisi. Isu tinotakura pasi rese. Mukati mevhiki isu tinowanzo shandira nyika dzakasiyana makumi matatu kukondinendi yega yega kunze kweSouth Pole. Vatengi Sevhisi ndiyo yedu yekutanga. Nekuti kunze kwako isu tichabuda kunze kwebhizinesi. Ndokumbirawo utitevere pa Instagram uye Facebook.
Zvinyorwa, Email kana kufona: + 1 214-444-9482
© Pisa Pelle Chikwata cheItaly
American Express Apple Pay Diners Club Discover Elo Google Pay JCB Mastercard PayPal Chitoro Bhadhara Venmo vhiza